Uchungechunge lwe-Apple 7 - Yakhelwe Njenge-IPhone 12 | TeraNews.net
Uchungechunge lwe-Apple 7 - idizayini ephefumulelwe nge-iPhone 12
umbhali UKravetz Pavel Kushicilelwe ku 08.12.2020
Ukwethulwa kwe-smartphone ye-iPhone 12 kukhombisile ukuthi inkampani isenabo abaklami. Ngemuva kwakho konke, isikhathi eside kangako, ukukhishwa kohlobo olufanayo lwamafoni kukhathele kakhulu. Ngisho nokufana kwegajethi ne-iPhone 4 akuzange kuyiphule i-idyll. Abathengi babingelele kahle umkhiqizo omusha, noma ngabe babhale ini ezingosini zezindaba nakuzinkundla zokuxhumana. Kunesidingo, ukuthengisa nakho kuyinkomba enkulu yomkhiqizi.
Kepha iwashi alikashintshi ukwakheka kwalo kusukela ngosuku lokwethulwa kwe-Apple Watch Series 4. Imibala emisha, izinto zokwakha - yebo. Futhi ukwakheka kuyafana. Futhi, ngokusho komklami uWilson Nicklaus, silindelwe inoveli ethakazelisa kakhulu. Uchungechunge lwe-Apple 7 - idizayini ngesitayela se-IPhone 12. Konke kubukeka kukuhle ezithombeni - isitayela sewashi siqine kakhulu. Ngokuqondile ku-smartphone entsha.
Ngemuva kokuthi lezi zithombe zifakwe ezinkundleni zokuxhumana, kwaqubuka imibono eminingi engemihle ku-Apple. Cishe ama-80% wabasebenzisi baphupha nge-Apple Watch enesibonisi esiyindilinga. Kunikezwa isibonelo I-Huawei Bukela i-GT2 Proentula ukulawulwa okujwayelekile kwe-iOS nokusebenza okulula kakhulu. Futhi-ke, wonke umsebenzisi wesibili ukhononda ngokuminza kwe-Apple Watch Series 2 maqondana nokunikezwa kwamandla. Usuku nohhafu akulona olubucayi.
I-ThundeaL TD96 - $ 200 FullHD Projector evela eChina
I-Google ihlela ukuqala ukukhiqizwa kwama-processor
IDyson V15 Detect - isizukulwane esisha sokuhlanza umshini
IHuawei Dynacare Smart Turbo - shaver kagesi ngo- $ 35
Iziphuphutheki ze-Starlink ziqeda i-intanethi enezintambo
I-Huawei Watch Fit Elegant - isinyathelo sokuqala esigabeni sebhizinisi
I-Blogger's set 3 in 1 Ring Light: ukubuka konke
I-Hummer EV SUV - kuvezwe uhlobo lwe-SUV kagesi
I-Messenger Signal - iyini, izici
IHuawei H6 WS8000 / 6 - amaShayina aqala ukwenyusa iMesh
Incwajana i-VAIO SX12 ithi incintisana neMacBook
I-One Netbook OneGx1 Pro - iPocket Gaming Laptop
UXiaomi washer ngewomile
I-ATV: yini, ukubuka konke, okungcono ukuthenga